10 Afei anuanom, mempɛ sɛ mo ani pa so sɛ na yɛn agyanom nyinaa wɔ mununkum no ase,+ na wɔn nyinaa faa ɛpo no mu,+ 2 na wɔbɔɔ wɔn nyinaa asu kɔɔ Mose mu+ wɔ mununkum ne ɛpo no mu; 3 na wɔn nyinaa dii honhom fam aduan koro,+ 4 na wɔn nyinaa nom honhom fam anonne koro.+ Wɔnom fii honhom fam ɔbotan+ a edii wɔn akyi no mu, na saa ɔbotan+ no ne Kristo.+ 5 Nanso Onyankopɔn ani ansɔ wɔn+ mu fã kɛse no ara, na wowuwui+ wɔ sare no so. 6 Na nsɛm yi bɛyɛɛ sɛnnahɔ maa yɛn, na yɛanyɛ nnipa a wɔn kɔn dɔ bɔne+ sɛnea wɔn kɔn dɔe no. 7 Monnyɛ abosonsomfo nso sɛnea wɔn mu binom yɛe no;+ sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Nkurɔfo no tenaa ase didii, nomee, na wɔsɔre gyee wɔn ani.”+ 8 Saa ara nso na mommma yɛmmfa yɛn ho nnhyɛ aguamammɔ mu sɛnea wɔn mu binom bɔɔ aguaman+ na wɔn mu mpem aduonu abiɛsa totɔe da koro+ no. 9 Saa ara nso na mommma yɛnnsɔ Yehowa+ nnhwɛ sɛnea wɔn mu binom sɔɔ no hwɛe+ na awɔ kunkum wɔn+ no. 10 Munnnwiinwii nso sɛnea wɔn mu binom nwiinwii+ na ɔsɛefo no sɛee wɔn+ no. 11 Na eyinom too wɔn sɛ sɛnnahɔ, na wɔakyerɛw de rebɔ yɛn a wiase nhyehyɛe+ yi awiei ato yɛn no kɔkɔ.+ 12 Enti nea odwen sɛ ogyina hɔ no nhwɛ yiye na wanhwe ase.+ 13 Sɔhwɛ biara ntoo mo, gye nea ɛto nnipa nyinaa.+ Na Onyankopɔn yɛ ɔnokwafo,+ na ɔremma wɔnsɔ mo nhwɛ ntra nea mubetumi,+ na mmom ɔbɛma kwan abɛda sɔhwɛ no ho+ a mode befi mu, na moatumi agyina ano. 14 Ne saa nti, m’adɔfo, munguan+ abosonsom.+ 15 Me ne mo kasa sɛ nnipa a wɔwɔ nhumu;+ nea meka no, mo ankasa mummu ho atɛn. 16 Nhyira kuruwa+ a yehyira so no, so ɛnyɛ Kristo mogya mu kyɛfa? Paanoo a yebubu no,+ so ɛnyɛ Kristo nipadua mu kyɛfa?+ 17 Esiane sɛ paanoo no yɛ biako nti, yɛdɔɔso de,+ nanso yɛyɛ nipadua biako,+ efisɛ yɛn nyinaa di paanoo koro no bi.+ 18 Monhwɛ honam fam Israel:+ So wɔn a wodi afɔrebɔde no nni kyɛfa wɔ afɔremuka no mu?+ 19 Ɛnde dɛn na menka? Sɛ́ nea wɔde bɔ afɔre ma ɔbosom no yɛ biribi, anaa ɔbosom yɛ biribi?+ 20 Dabi; na mmom meka sɛ afɔre a amanaman no bɔ no, wɔbɔ ma adaemone,+ na ɛnyɛ Onyankopɔn; na mempɛ sɛ mo ne adaemone nya twaka biara.+ 21 Muntumi nnom Yehowa kuruwa+ ne adaemone kuruwa ano; muntumi nnidi wɔ “Yehowa pon”+ so ne adaemone pon so. 22 Anaasɛ “yɛrehyɛ Yehowa abufuw”?+ Yɛn ho yɛ den+ sen no anaa? 23 Hokwan wɔ hɔ ma ade nyinaa; nanso ɛnyɛ ne nyinaa na mfaso wɔ so.+ Hokwan wɔ hɔ ma ade nyinaa;+ nanso ɛnyɛ ne nyinaa na ɛhyɛ den.+ 24 Obiara nnhwehwɛ nea eye ma ne nko,+ na mmom ne yɔnko nso de.+ 25 Biribiara a wɔtɔn wɔ namgua so no, monkɔ so nni,+ na mummmisabisa ho nsɛm, mo ahonim nti;+ 26 efisɛ “asase ne emu nneɛma nyinaa yɛ Yehowa+ dea.”+ 27 Sɛ wɔn a wonnye nni no mu biara to nsa frɛ mo na mopɛ sɛ mokɔ a, munni nea wɔde besi mo anim biara,+ na mummmisabisa ho nsɛm, mo ahonim nti.+ 28 Nanso sɛ obi ka kyerɛ mo sɛ: “Eyi yɛ biribi a wɔde abɔ afɔre” a, nea ɔkaa ho asɛm no ne ahonim nti, munnni.+ 29 Sɛ meka “ahonim” a, menkyerɛ wo de, na mmom onipa foforo no de. Na adɛn nti na ɛsɛ sɛ onipa foforo ahonim bu hokwan a mewɔ atɛn?+ 30 Sɛ mede aseda di a, adɛn nti na ɛsɛ sɛ wɔkasa tia me wɔ biribi a mede ho aseda ama ho?+ 31 Enti sɛ moredidi oo, morenom oo, moreyɛ biribi foforo biara oo, monyɛ ne nyinaa mfa nhyɛ Onyankopɔn anuonyam.+ 32 Monhwɛ na moanto Yudafo ne Helafo ne Onyankopɔn asafo no hintidua,+ 33 sɛnea meresɔ nnipa nyinaa ani wɔ ade nyinaa mu,+ a menhwehwɛ nea ehia m’ankasa+ na mmom nnipa pii de, na ama wɔagye wɔn nkwa+ no.